Ukubonakala kubonisa i-Live OTT Transcoding Software kwi-IBC 2017-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat. Umsasazo osemthethweni we-NAB Bonisa, uMvelisi we-NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » Ukubonakala kubonisa i-Live OTT Transcoding Software kwi-IBC 2017
Ukubonakala kubonisa i-Live OTT Transcoding Software kwi-IBC 2017
AMSTERDAM, SEPTEMBA 12, 2017 - Ukufumaneka kunye nomthamo we-Intanethi uyanda. Kwakhona kunjalo nokuxhaphaka kweikhomputha ezinamandla, i-TV edibeneyo, iipilisi kunye nomnxeba. Ezi zinto zidibeneyo zivumela ababukeli ukuba bafumane umxholo wevidiyo kubasasazo naphi na, malunga nayiphi na ifomu. Njengoko ezinye iziteshi ezithandwayo zifumaneka nge-intanethi, ababukeli baqala ukuyithatha. Ukubonelela ngeenkonzo kunye neenkonzo zonxibelelwano zonxibelelwano, le mveliso efanayo ibangela inselele enkulu: ukubonelela ngeyona ndlela ihamba phambili yevidiyo kumafomu amaninzi, kungakhathaliseki ukuba kunxibelelwano lweewebhu kunye nezixhobo zokubukela ezisetyenzisiweyo. Kule ndlela, izisombululo ezinokwethenjelwa ze-software zihamba ngokufunekayo.
Ukuqaphela le ndlela, Kubonakala lizisa layo Live OTT Transcoding Software at IBC 2017 (Yima 1.C61). Inxalenye ebalulekileyo yePhotofolio ye-Software Appeal, isisombululo sinceda abapapasho kunye nabasebenzi ukuba banikele ngeenkonzo eziphezulu ze-multisreen ngokusebenzisa i-COTS hardware. Iikhowudi zenza isiseko sesisombululo; Ukuhambisa imida yeendaba kummandla wolwazi lweefayile. Amanqanaba omgangatho wokucwangcisa angachazwa ngabanye ukuba aphumeze umgangatho ohlukeneyo kunye nee-tradeoffs zentsholongwane. Ukukhutshwa kwe-Flexible, uku-interlacing, ukuguqulwa kwesantya-mali kunye nokukhethwa kwegama-logo kuqinisekisa imifanekiso eqingqiweyo.
"I-OTT Live Transcoder inikezela abathengi bethu amandla okubonelela ngeenkonzo eziphezulu ze-multi-free," kusho uCarl Walter Holst, CEO. "Abasasazo banokuqiniseka ukuba iinkonzo zabo zilungiselelwe naliphi na ifowuni kwisizinda se-OTT. Sibheke phambili ukubonisa esi sixazululo kwi-IBC, kwaye ndingathanda ukugxininisa ukuba sinesisombululo esicwangcisiweyo seprojekthi kwisipopu esiza kusondela. "
I-OTT Live Transcoder ye-Live Live ijonge ngokuqhubekayo ukusebenza kwekhowudi ngexesha lokusebenza. Ngokuhlanganiswa kweendlela zokulawula umgangatho onamandla, inkqubo iphendula kwii-spikes ezingalindelekanga kwi-speed encoding ngokuzenzekelayo ukulungelelanisa izicwangciso zekhwalithi ukuze ugcine isilinganiselo sesiqalo esilungileyo. Ubunxibelelwano olulodwa oluphakathi luqinisekisa ukukhululeka kolawulo, kungakhathaliseki ukuba inani lamaseva kunye neenkonzo. Izicwangciso zokucwangcisa ezifana nezigqibo kunye neetrate zingagcinwa njenge-presets, okwenze kube lula ukukrawula inkqubo ukuya kwiininzi okanye nakwikhulu leenkonzo.
Ukuhlukana ngokwaso kwiisombululo ezifanayo kwiimarike, inkqubo yolawulo imanyathelo kwaye ilandele ukusebenza kwe-transcoding, inqanda ukuba amaseva angabi niselo. Ngokwabelana okanye ukusasaza umthwalo wemisebenzi kwiinkonzo ezininzi, inkqubo igcina umsebenzi ophezulu kunye nokuzinza kwenkqubo. Xa kwenzeka ukuhluleka komncedisi, inkqubo ye-redundancy ishukumisa iinkonzo ezichaphazelayo kumaseva ngamandla okugcina, ukuphazamiseka kwenkqubo kumncinci.
Kubonakala kusekelwe e-Oslo, eNorway, kunye ne-ofisi eyongezelelweyo eBangkok, eThailand. Inkampani ikhiqiza izixhobo zeklasi zehlabathi ezivumela abasebenzisi ukuba banike iinkonzo zokusasaza ngezobuchwepheshe kwizigidi zabasebenzisi emhlabeni wonke. Inkampani iyazinikezela ekuphuhliseni izisombululo ezinokwethenjelwa, ezivelisa imali kunye nezobuchule kubaqhubi abafuna ukuhambisa umxholo wexesha langempela ekhaya. Izihloko ezibonakalayo zenzelwe ukulungelelanisa, ukunyaniseka okukhulu, kunye nokuguquguquka. Www.appeartv.com
I-MILLER TRIPODS YENZA I-ALL-IN-ONE ONE FLUID HEAD IINKCUKACHA ZEZICINEMATOGRAPHER ANTÓNIO MORAIS - Julayi 11, 2018
Kubonakala kwiTV Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli IBC IBC 2017 ukudityaniswa Injini yeVidiyo	2017-09-12
Previous: I-FireFly Cinema ukubonisa i-V6 ye-FireDay Management Dailies Digital ku-IBC 2017
next: I-Amino iqinisekisa iiAria ezixhobo kunye ne-Minerva 10 yesikhulumi se-TV esiphezulu
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "Ukubonakala kubonisa i-Live OTT Transcoding Software kwi-IBC 2017". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/appear-unveils-live-ott-transcoding-software-at-ibc-2017/. Enkosi.